ဆုံးအမှား “Disk ကိုရေး-protected” သို့မဟုတ် “မကောင်းတဲ့ superblock” – တေလာ Lopes ツဘလော့
ငါလိုခငျြသူအပေါင်းတို့သည် Micro SD Card ကို Format ချဖို့ဖြစ်တယ်! ပထမတော့, ငါက Windows အားဖြင့်စုံစမ်း, ဒါပေမဲ့ဒါဟာအလုပ်မပြုခဲ့. ငါကထူးဆန်းတဲ့ကိုတွေ့, ပါတီမသန်စွမ်းအွမ် Linux ကို Ubuntu ကို na VM ကို Virtubal Box ကို, ငါအောက်ပါအမှားဖြတ်ပြီးလာသောအခါ:
အမှားအထိုင် /dev/မှာ sdb2 /မီဒီယာ/myuser/61187ff0-d686-48dd-832အီး-f8f0589696e9: အမိန့်-လိုင်း `တောင်ပေါ်မှာ -t ကို "ext4" -အ "uhelper=udisks2,nodev,nosuid" "/dev/sdb2" "/media/myuser/61187ff0-d686-48dd-832e-f8f0589696e9"'' Non-သုညထွက်ပေါက်အဆင့်အတန်းနှင့်အတူမထွက် 32: တောင်ပေါ်မှာ: /dev / sdb2 ရေး-ကာကွယ်ထားသည်, mounting ဖတ်-သာ
တောင်ပေါ်မှာ: မှား fs အမျိုးအစား, မကောင်းတဲ့ option ကို, / dev / sdb2 အပေါ်မကောင်းတဲ့ superblock,
ပျောက်ဆုံး codepage သို့မဟုတ်အထောက်အအစီအစဉ်, သို့မဟုတ်အခြားအမှား
အချို့ကိစ္စများတွင်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ syslog ထဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် - ကြိုးစား
dmesg | အမြီးသို့မဟုတ်ဒါ.
အမှား mounting / dev / sdb2 မှာ / မီဒီယာ / myuser / 61187ff0-d686-48dd-832e-f8f0589696e9: Command-line `mount -t "ext4" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid" "/dev/sdb2" "/media/myuser/61187ff0-d686-48dd-832e-f8f0589696e9"' exited with non-zero exit status 32: တောင်ပေါ်မှာ: /dev / sdb2 ရေး-ကာကွယ်ထားသည်, mounting read-only mount: မှား fs အမျိုးအစား, မကောင်းတဲ့ option ကို, / dev / sdb2 အပေါ်မကောင်းတဲ့ superblock, ပျောက်ဆုံး codepage သို့မဟုတ်အထောက်အအစီအစဉ်, or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | အမြီးသို့မဟုတ်ဒါ.
disk ကိုရေး-protected; အသုံး အ -ဎ option ကိုမှ ပြုပါ တစ်ဖတ်-သာ
Disk ကိုရေး-protected; တစ်ဦးဖတ်ရန်အတွက်သာလုပ်ဖို့ -n option ကိုအသုံးပြု
ဒါဟာသိသာသလိုပဲ, က disk အရေးအသားမှကာကွယ်ခဲ့ကွောငျးကိုညွှန်းသတင်းစကား (သာဖတ် / သာဖတ်), တစ်ချိန်တည်းမှာဆက်စပ်တစ်ခုခုရှိခဲ့ “မကောင်းတဲ့ superblock”, ဒါပေမယ့်ပင်အမျိုးမျိုးသောပညတ်တော်ကြိုးစားနေ, ဖြေရှင်းနိုင်မ.
ငါအချို့သော Google ရှာဖွေမှုပြုအများအပြားရေးသားချက်များကိုတွေ့, နောက်ဆုံးအထိအလင်း:
– မကောင်းတဲ့ superblock မှထမြောက်ဖို့ကိုဘယ်လို
– တစ်ဦးကို virtual machine တနေ SD ကဒ်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ကိုဘယ်လို
– တစ်ဦးအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို Linux ext4 file system ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နှင့် superblock recover
– / dev ဖွင့်လှစ် / SDB ဖတ်-ရေးဖို့မအောင်မြင်ဘူး (Read-သာ file system ကို)
– ဘယ္လို: Ubuntu မှာကျိုး Ext4 Superblock ပြုပြင်
– ပုပ် fat32 sd ကဒ် superblock ပြုပြင်လုပ်နည်း
– ချွတ်က USB အလှည့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
ဒီဖြေရှင်းချက်ရိုးရှင်းတဲ့ခဲ့သည် (ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်) နှင့် diskettes ၏အချိန်ငါ့ကိုသတိပေး. ဘာဖွစျခြို့ကို SD ကဒ်များနဲ့ USB flash drive ကိုတစ်သော့ခတ်ထားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် (သော့ခတ်) အ disk ကိုကာကွယ်သောအခြမ်း write-. ငါကငါ့အစိတျကိုဖြတ်ကျော်ဘယ်တော့မှဝန်ခံ :''(
ထိုအခါ, ဒါကြောင့်အများအားဖြင့်တံခါးကျင်နှင့် format ကိုလွှတ်ပေးရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခဲ့သည်.
ကို http://www.rmprepusb.com/tutorials/54—ဘယ်လောက်မှပြင်ဆင်ချက်-ရေး-protected-disk တွေ
စုစုပေါင်း access: 10459
19 ဇွန်လ 2016 တေလာ Lopes	မကောင်းတဲ့ superblock, disk ကိုရေး-protected, Micro SD Card ကို
တစ်ဦးကသုံးသပ်မှုအပေါ် “ဆုံးအမှား “Disk ကိုရေး-protected” သို့မဟုတ် “မကောင်းတဲ့ superblock””
Yulli dias Tavares Alves ကပြောပါတယ်:
6 ဒီဇင်ဘာလ 2017 သို့ 12:21
မူပိုင်ခွင့် © 2021 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 2.965.923 ဝင်ရောက်ခွင့်